10 Sakafo mety hipoaka noho ny fiovan'ny toetr'andro
Misaotra ny Tontolo Iainana, ny lisitry ny safidy amin'ny endriny dia tsy natao ho an'ny biby intsony
Noho ny fiovan'ny toetr'andro , mety tsy mila miezaka ny miaina ao anatin'ny tontolo mafana kokoa isika fa ny tsy dia tsara ihany koa.
Ho an'ny fahasamihafan'ny gazy karbonika ao amin'ny atmosfera, ny fihenjanana mivaivay, ny hain-tany maharitra, ary ny fisehoan-drivotra goavana mifandraika amin'ny fiakaran'ny mari-panaitra dia mbola misy fiantraikany eo amin'ny toetr'andro isan'andro, adinontsika matetika koa fa misy fiantraikany amin'ny habetsahana, amin'ny sakafo. Ny sakafo manaraka dia efa nahatsapa ny fiantraikany, ary noho izany, dia nahazo toerana ambony teo amin'ny lisitra "sakafo mahasalama" eto amin'izao tontolo izao. Maro amin'izy ireo no mety ho lasa ao anatin'ny 30 taona manaraka.
Na tsapanao ny fametrahanao ny tapakila kafe iray isan'andro, dia mety hamela anao tsy hanana safidy ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro eo amin'ny faritra misy ny kafe.
Ny famokarana kafe any Amerika Atsimo, Afrika, Azia ary Hawaii dia tandindomin-doza noho ny fiakaran'ny hafanan'ny rivotra sy ny lozam-panafody diso tafahoatra, izay manasa karazana aretina sy karazan-javamaniry mba hampangotraka ny zavamaniry kafe sy ny tsaramaso. Ny vokany? Fanapahana manan-danja amin'ny fahazoan-kafe (sy ny kafe eo amin'ny kaopy).
Ny fikambanana toy ny Institute of Climate Klimaa any Aostralia dia manombatombana fa, raha mitohy ny famolavolana ny toetr'andro, ny antsasaky ny faritra mifanentana amin'ny famokarana kafe dia tsy amin'ny taona 2050.
Ny cousin cocaine cocaine, cacao (aka sôkôla) dia mijaly ihany koa amin'ny fiakaran'ny hafanan'ny fiakaran'ny hafanana. Saingy ho an'ny sôkôlà, tsy ny rivodoza mafana ihany no olana. Ny hazo Cacao dia aleony kokoa mafana kokoa ... raha toa ka miara-misakafo tsara sy ny orana be dia be izany (izany hoe, ny ala tropikaly). Araka ny tatitry ny taona 2014 avy amin'ny Sehatry ny Fiombonambe Iraisam-pirenena momba ny fikorontanan'ny toetrandro (IPCC), ny olana dia ny fiakarana avo lenta kokoa amin'ny firenena matanjaka miteraka sôkôla (Côte d'Ivoire, Ghana, Indonezia) dia tsy andrasana ny hanaraka azy mitombo ny orana. Noho izany, raha mihalava kokoa ny hafanana avy amin'ny tany sy ny zavamaniry amin'ny alàlan'ny fandroana ny hafanana, dia mety tsy hitombo ny rotsak'orana mba hampihenana izany fahaverezan'ny voa izany.
Ao amin'io tatitra io ihany, ny IPCC dia maminavina fa mety hampihena ny famokarana kakao ireo vokatra ireo, izay midika ho 1 900 000 taonina bararata, truffles ary vovobony isaky ny 2020.
Raha ny dite (ny sakafo faharoa indrindra amin'ny zava-pisotro misy alikaola manerantany amin'ny rano), ny toetr'andro mafana sy ny fisalasalan'ny hadalà dia tsy vitan'ny fitomboan'ny faritra mampitombo ny taova any amin'izao tontolo izao, fa mifangaro amin'ny tsirony ihany koa izy ireo.
Ohatra, any Inde, ireo mpikaroka dia efa nahita fa ny Indian Monsoon dia nitondra oram-batravatra mahery kokoa, izay manondraka ny rano ary manalefaka ny tsiranoka avy amin'ny dite.
Ny fikarohana vao haingana avy amin'ny Oniversiten'i Southampton dia nanoso-kevitra fa mety ho ny 55 isan-jato eo ho eo amin'ny 2050 no mety hianjera amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiovaovan'ny toetr'andro any amin'ny faritra sasany, indrindra fa any Afrika Atsinanana.
Ny mpikamabady (eny, ny ravin-dite dia efa voaangona amin'ny tanana) dia mahatsapa ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Mandritra ny fotoam-pijinjana dia mitombo ny mari-piteran'ny rivotra iainan'ny rivotra ho an'ny mpiasa.
Sary Sary Pantry / Natasha Breen / Getty Images
Maherin'ny ampahatelon'ny roan-tantely Amerikana dia very tamin'ny Colony Collapse Disorder , saingy ny fiovaovan'ny toetr'andro dia manana fiantraikany manokana amin'ny fitondran-tenona. Araka ny fandinihan'ny Sampan-draharahan'ny Sampan-draharahan'ny Fambolena Amerikana 2016, ny fihenan'ny dioxide avoakan'ny karbôna dia mampihena ny haavon'ny proteinina ao amin'ny pollen - loharanom-pihinanam-be iray. Vokatr'izany dia tsy ampy sakafo ny tantely, ka mety hitarika ho amin'ny fambolena kely kokoa ary mety ho faty mihitsy aza. Hoy i Lewis Ziska, mpitsabo aretin-koditra nataon'ny USDA: "Manjary sakafom-bovoka ny pollen."
Saingy tsy ny hany fomba mahatonga ny toetr'andro hiadiana amin'ny tantely. Ny hafanana be loatra sy ny felam-biriky taloha dia mety hampitombo ny voninkazo sy ny hazo mamy mialoha ny lohataona; s o aloha, raha ny tena izy, dia mety mbola eo amin'ny dabilio ihany ny volombava ary tsy mbola matotra loatra mba handotoana azy ireo.
Ny volon'ireo mpiasa vitsy kokoa mba handotoana, ny fihinan'ny tantely izay azony atao. Ary izany dia midika fa vitsy kokoa ny vokatra, satria ny voankazo sy ny legioma dia misy noho ny tsy fisian-tsasatra sy ny fandotoana nataon'ireo biby teratany.
Sary Source / Getty Images
Ny fiovan'ny toetrandro dia misy fiantraikany eo amin'ny akoholahy eto an-tany, toy ny fambolena.
Rehefa miakatra ny mari-pahaizana amin'ny rivotra, dia mihazona ny sasany amin'ny hafanana ny ranomasimbe sy ny ranomasimbe ary miandry ny azy manokana. Ny vokatra dia ny fihenan'ny isan'ny trondro, anisan'izany ireo mpihin-tanimbary (izay marefo), ary salmon (ny atody no mahita fa sarotra ny miaina ao anaty rano). Ny rano mangatsiaka koa dia mampirisika ny bakteria an-dranomasina mampidi-doza, toy ny Vibrio, mba hitombo sy hiteraka aretina amin'ny olona rehefa misotro ronono mafana, toy ny oysters na sashimi.
Ary izany fahafaham-baraka mahavelona izany azonao rehefa mihinana crab sy lava? Azo atao ny mangina toy ny tifitra shellfish mba hananganana karbônina karbôna, vokatry ny fanamafisana ny ranomasimbe (mihazona ny gazy karbonika avy eny amin'ny rivotra).
Na dia ratsy kokoa aza ny fahafahana tsy hihinana seafood intsony, izay araka ny fandaharam-pianarana Dalhousie 2006, dia mety. Anatin'ity fandinihana ity dia nilaza ny mpahay siansa fa raha mitohy ny fisondrotan'ny fanjonoana sy ny fiakaran'ny hafanam-po amin'ny tombam-pahaizana ankehitriny, dia hihena ny tahirin-tsakafo eran-tany amin'ny taona 2050.
Raha ny vary dia mihamitombo ny fiakaran'ny toetr'andro raha oharina amin'ny voankazo.
Ny fambolena varimbazaha dia vita amin'ny sahan- drano (antsoina hoe lemaka), fa rehefa mitombo ny mari-pana eran-tany dia matetika miteraka fisotroana matetika sy mahery vaika, mety tsy ampy ny rano ho an'ny tondra-drano any amin'ny faritra tena avo (mahazatra 5 santimetatra lalina). Mety ho sarotra kokoa ny mamboly ity voankazo mahavelona ity.
Mahalana ihany, ny vary irery no mitondra ny hafanana izay mety hanakana ny fambolena azy. Ny ranom-boaloboka dia manakona oksizenina avy amin'ny loto eny amin'ny tany ary mamorona ny toe-piainana tsara ho an'ny bakteria metàn. Ary ny metàn, araka ny fantatrao, dia gazy fiaramanidina maherin'ny avo mihoatra ny avo 30 heny noho ny hafanana amin'ny gazy karbonika.
Ny fikarohana natao vao haingana momba ny mpikaroka any Kansas State dia mahita fa amin'ny faran'ny folo taona manaraka, fara-fahakeliny ny vokatra varatra an'arivony manerana izao tontolo izao dia ho very noho ny toetr'andro sy ny fiakaran'ny rano raha tsy misy fepetra arovana.
Hitan'ny mpikaroka fa ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fitomboan'ny hafanana amin'ny vary dia henjana kokoa noho ny fanombohan'ny fotoana iray ary mitranga tsy ho ela. Na dia mitombo aza ny fitomboan'ny hafanana midadasika, ny fanamby lehibe dia ny faratampony tafahoatra vokatry ny fiovan'ny toetr'andro. Hitan'ny mpikaroka koa fa mitombo ny mari-pana vetivety, izay tsy maintsy mamolavola ny voam-bary ary mamokatra loha feno amin'ny fotoam-pijinjana.
Araka ny fandalinana iray navoakan'ny Ivontoerana Postdam for Research momba ny fiantraikany amin'ny fikorontanan'ny toetrandro, ny voamaina sy ny soja dia mety hahavery 5% ny fijinjana azy ireo isan'andro, ny haavony dia miakatra ambony noho ny 86 ° F (30 ° C). (Ny voankazo masira dia mahatsapa indrindra ny onjam-pahagagana sy ny hain-tany). Noho izany dia mety ho latsaka 50 isan-jato ny vidin'ny vokatra azo avy amin'ny varimbazaha, soja, ary katsaka.
Ny patsa sy ny kiririoka, ireo voankazo roa lehibe indrindra amin'ny vanin-taona mafana, dia mety hijaly noho ny hafanana be loatra.
Araka ny filazan'i David Lobell, tale lefitra ao amin'ny Ivotoerana misahana ny Sakafo ara-tsakafo sy ny tontolo iainana ao amin'ny Oniversiten'i Stanford, ny hazo fihinam-boa (tafiditra ao anatin'izany ny kirihitra, ny poma, ny pear, ary ny abiko) dia mitaky "ora hafanam-be" - vanim-potoana ahafahan'izy ireo miserana ny mari-pana eo ambanin'ny 45 ° F (7 ° C) isaky ny ririnina. Mialatsiny ny hatsiaka, ary ny voankazo sy ny voankazo dia mitolona mba hialana amin'ny rivo-doza sy ny voninkazo amin'ny lohataona. Farany dia midika izany ny fihenan'ny habetsahana sy ny kalitaon'ny voankazo izay vokarina.
Tamin'ny taona 2030, ny mpahay siansa dia manombatombana ny isan'ireo 45 ° F na kolta andro mandritra ny ririnina dia hihena be.
Sary avy amin'i Sara Lynn Paige / Getty Images
Ny fiakaran'ny hafanana any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Etazonia sy Kanada dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny sarin-javamaniry siramamy, anisan'izany ny fanesorana ny ravin- tsofin'ny hazo sy ny fanindriana ny hazo mankany amin'ny fihenan'ny tany. Saingy raha mbola mety ho efa am-polo taona maro ny fialana siramamy avy any Etazonia, dia efa miharatsy ny vokatra azo avy aminy - ny siramamy ahitra - ankehitriny .
Ho an'ny iray, ny ririnina mafana sy ny rivodoza-yo (vanim-potoana mangatsiaka milomano miaraka amin'ny hafanana tsy manam-paharetana) any avaratra-atsinanana dia efa nahenany ny "fotoana mampivadibadika" - ny vanim-potoan'ny hafanana mangatsiaka mba hamerenana ny tahiry voaaro amin'ny siramamy sap, fa tsy mafana loatra ka mahatonga azy hiteraka. (Rehefa maniry ny hazo dia lazaina fa siramamy kely ny sap).
Ny toetr'andro mafana ihany koa dia nampihena ny fahamoram-panahin'ny maple. "Ny zavatra hitanay dia hoe rehefa avy namokatra voa betsaka ny hazo, dia tsy ampy ny siramamy ao anaty savony," hoy i Elizabeth Crone, manam-pahaizana momba ny tontolo iainana Tufts. Crone dia manazava fa rehefa miontana kokoa ny hazo dia mamafy masomboly izy ireo. "Hanampy betsaka kokoa ny hareny izy ireo amin'ny famokarana masomboly izay afaka manantena any an-toeran-kafa izay tsara kokoa ny tontolo iainana." Midika izany fa mitaky loko maromaro kokoa ny vilany mba hanaovana siramamy madio amin'ny siramamy ahitra miaraka amin'ny voka-dratsiny 70%. Indroa amboadia be dia be.
Ny toeram-pambolena maple dia mahita siropam-pahaizana tsy misy loko ihany koa, izay heverina ho marika "vokatra madio" kokoa. Mandritra ny taona mafana dia misy siramamy maizim-pito na amber bebe kokoa.
Ny voanjo (ary ny ronono afa-jomà) dia mety ho iray amin'ireo mahazatra kely indrindra, fa ny zavamaniry maniry kosa dia heverina ho mamy be, eny fa na dia ny mpamboly aza.
Ny zavamaniry voajanahary dia mitombo tsara rehefa mahazo dimy volana amin'ny toetr'andro mafana sy ny orana 20-40 santimetatra. Ny zavatra kely sy ny zavamaniry dia tsy ho tafavoaka velona, ​​ary tsy dia mamokatra loatra. Tsy vaovao tsara izany raha heverinao fa ny ankamaroan'ny fiovaovan'ny toetrandro dia miombon-kevitra fa ny toetran'ny ho avy dia ho iray amin'ny tafio-drivotra, anisan'izany ny hain-tany sy ny hain-trano.
Tamin'ny taona 2011, nahitam-boka ny ho avin'ny ho avin'ny voanjo ny tontolon'ny toetrandro rehefa nitombo ny hain-tany nandritra ny fitomboan'ny haintany tany atsimo atsinanan'i Etazonia. Araka ny filazan'ny CNN Money, ny famokarana maina dia nahatonga ny vidin'ny sahona ho niakatra mihoatra ny 40 isan-jato!
Ny siansa aorian'ny fiovan'ny toetrandro: Oseana
Inona no mampisy fiantraikany maneran-tany?
Inona no Atao hoe Afobe?
Inona no Atao hoe Tafahoatra?
Inona no atao hoe Kyoto Protocol?
Ahoana no mahatonga ny Olona hiova amin'ny fiovan'ny toetr'andro?
Fiovan'ny toetr'andro sy ny fiovaovan'ny toetr'andro
Torolalana amin'ny fametrahana ny "Balayer" (hanalefaka)
Codes postales pour Canada
Ahoana no nahitana ny Brachiosaurus?
Inona ny Skateboarding?
Top 'Songs 80 momba ny asa
Loharanom-pahatsiarovana tsy hay hadinoina avy amin'i 'Lord of the Flies' nataon'i William Golding
Ahoana no hanomezana ny teny hoe Impromptu
Fanadihadiana sy tantaran'ny rockets
Serotiny sy ny Serotinous Cone
Mankalaza ny Krishna androany amin'ny Janmashtami
Famaritana ny alàlan'ny Chain Alkane
Teny nalaina avy amin'i 'Lolita' nataon'i Vladimir Nabokov
Mivavaka ve ny Bodista?
Ny soritr'aretin'ny tsy fahombiazan'ny Master Cylinder
Zavatra Mahaliana Momba ny Fiteny Espaniola
Inona no niandohan'ny andro fankalazana ny volana Aprily?
Ny boky tsara indrindra: Ny ady tao Waterloo
Vital records of Ireland - Registration of civilians
10 Torohevitra momba ny fahazoana miaraka amin'ny mpiara-mianatra amin'ny kolontsaina